Toriteny 12 Oktobra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 12 Oktobra 2013
Deotornomia 28:9-14 / Marka 9:19-29 / I Koritiana 9:7-12
« Manantena fahombiazana ny mino »
“Manantena fahombiazana ny mino” , Ny Deo : 28 no ndeha hanompanantsika ny fampianarana amin’ity anio ity. Mitantara indrindra ny fiainan’ny Zanak’Israely tafita ny ranomasina Mena izany hoe efa nandray ny famonjen’Andriamanitra ka nanolorana’Andriamanitra ny didy folo mba ho tandremany sy hitaiza azy ireo mialoha ny hidirany any Kanana.
1- Mahomby izay mitandrina ny didin’Andriamanitra
De28: 1-2 dia manasongadina fa Izy Andriamanitra tenany mihitsy no miteny manao hoe tandremo ny didiko . Tsy sitrak’Andriamanitra ny hiainantsika amin’ny fijaliana ka dia misisika mafy Izy amin’ny maha Andriamanitra fitiavana Azy mba handehanantsika olombelona amin’ny lalana izay efa nosoritany . Voarakitra ato anaty Baiboly ireo toromarika rehetra nomen’Andriamanitra ho fiainantsika ka tsy amin’ny vava na saina fotsiny no anekentsika fa aseho amin’ny andavan’androm-piainana fa mivelona sy mankato ny Tenin’Andriamanitra aho . Ao anatin’izay fitandremanana ny didin’Andriamanitra izay no amohana’Andriamanitra ny varavaran’ny lanitra handraisantsika ny fahombiazana.
2- Voatahy izay taranaka mino an’Andriamanitra
Marka 9 : 19 – 29 Tsy ny tenan’ny olona izay mino ihany no asian’Andriamanitra soa, fa porofoiny eto amin’ity tantara ity, fa nositranin’I Jesoa koa ny zanak’ilay lehilahy narary. Ny finoan’ilay Raim-pianakaviana no nandraisan’ny ankohonany sy ny taranany fanasitranana. Entanina isika mba hitoetra tsara amin’ny finoana an’Andriamanitra ary hanao ho zava-dehibe izany finoana izany mihoatra noho ny zavatra rehetra fa marina ary tsy mba mamitaka ny Tenin’Andriamanitra ambarany amintsika rehefa tena ekena sy raisintsika amin’ny finoana. Ny fitoerana amin’ny finoana no mitaona antsika hahery amin’ny vavaka ka andraisantsika ny valiny andrandraintsika ; dia ny fahombiazana avy amin’Andriamanitra.
3- Mahavokatra ny olona manana toe-panahy araka an’Andriamanitra
Ny II Pet 1: 4 dia mitanisa ireo toe-panahy tokony hananana mba hahavokatra , ireo toetra voatanisa ireo dia tsy ho toetrantsika amin’ny maha olombelona nofo mihitsy fa tsy maintsy miankina amin’i Jesoa Kristy. Izay manana firaiasana amin’I Jesoa ihany no mahazo maimaimpoana ireo toe-panahy ireo , koa mampianatra antsika ny Tenin’Andriamanitra fa mila manana firaisana Amin’Izy Tompo mandrakariva isika mba tsy halaina fa tena hahavokatra be .
Ho famehezana izay rehetra voalaza ary , ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no fanalahidin’ny fahombiazana , , tsy ny tenantsika ihany no voatahy fa hatramin’ny taranaka mandimby koa aza rehefa tena mitoetra amin’ny finoana Azy Andriamanitra ho Mpamonjy isika. Io finoana io no mampiray antsika amin’io Jesoa Kristy ka hananantsika ilay toe-panahy araka an’Andriamanitra mba hahatonga antsika hahavokatra be .
RABENINTANY Nirina , Mpitoriteny
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 19 octobre 2013